Tizonia mumhanzi mutambi weiyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
Tizonia mutambi wemimhanzi izvo zvinogona tamba mafaera emumhanzi akachengetwa imomo uye kwete izvo chete asi izvo zvakare zvinokutendera iwe teerera Titus mimhanzi inoyerera mapuratifomu vadikani.
Spotify premium, Google Play Music uye Soundcloud ndiwo akakurumbira masevhisi ekushambadzira iyo yatinogona kushandisa muTizonia, kuwedzera kune mutambi inotibvumira mukana wekugadzira yemuno sevhisi sevhisi kuitira kuti zvishandiso zvese zvakabatana nenetiweki yedu zvigone kuwana yedu repertoire.
Mutambi inouya neyayo OpenMAX-based multimedia fomati, iyo yakasununguka kune avo vanozivikanwa muLinux, senge ffmpeg, libav, gstreamer kana libvlc. OpenMAX inoyambuka-chikuva, isina mvumo API iyo inopa yakazara kutepfenyura midhiya codec.
Mukati mabasa atinowana:
Mutambi aripo weDebian naRasberry Pi
Iyo inotipa isu kugona kutamba emuno multimedia mafaera
Mutambi anouya pamwe neredhiyo kusangana: SHOUTcast / Icecast
Inzwi Cloud kusanganisa
Google Music kusangana
Remote control rutsigiro uchishandisa MPRISv2
Panyaya yeGoogle Music naSpotify, kushandisa mutambi zvinofanirwa kuve neAccount account Sezvo isina rutsigiro rwemahara maakaundi, mune iyo Ruzha Cloud tinogona kushandisa yemahara vhezheni pasina matambudziko.
Kunyangwe iyo application isina interface yemushandisi, chishandiso chakanakisa kana zvasvika pakuponesa zviwanikwa, uye vazhinji vashandisi vanofarira kushandisa iyo terminal.
1 Maitiro ekuisa Tizonia pane Ubuntu?
1.1 Maitiro ekuisa Tizonia pane Arch Linux?
Maitiro ekuisa Tizonia pane Ubuntu?
Chirongwa Tinogona kuiisa kwete muUbuntu chete asiwo mune zvakatorwa zvakagoverwa yazvo uye zvakare muDebian uye zvigadzirwa zvayo.
Isu tinofanirwa kuita inotevera gadziriso, usati waenderera nekumisikidza:
Kuti tiite izvi, tinofanirwa kurodha mugadziri wayo nemirairo inotevera:
Iko kunyorera kwakagadzirirwa kusvika mushanduro 16.04 saka kuisirwa kwayo mune dzimwe shanduro handisati ndaedza izvozvi. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvake, ini ndinokusiya iwe yako git chinongedzo.
Maitiro ekuisa Tizonia pane Arch Linux?
Muchiitiko cheArch Linux kugoverwa uye zvigadzirwa zvayo tinozviisa ne:
Pasina imwezve ado, chinhu chega chandinogona kutaura ndechekuti zvakakodzera kupa mutambi uyu mukana uye nekuziva kugona kwese kwaakaviga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Tizonia mimhanzi inoridza yekupedzisira
Ini ndaizozviedza asi ini ndiri kufara kwazvo ne cmus
Kugoverwa kweBlackArch kunovandudzwa